ခုတလော လိုင်းပေါ်တွင် မြင်တွေ့နေရတဲ့ သတင်းတွေအပေါ် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူငယ်ချင်းအပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ မေ… – Shwe Thadin
ခုတလော လိုင်းပေါ်တွင် မြင်တွေ့နေရတဲ့ သတင်းတွေအပေါ် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူငယ်ချင်းအပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ မေ…
28/06/2021 T Z News 0
ခုတလော လိုင်းပေါ်တွင် မြင်တွေ့နေရတဲ့ သတင်းတွေအပေါ် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူငယ်ချင်းအပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ မေ….
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ကျန်းမာရေး ကြောင့် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ တဲ့ အဆိုတော် ကိုရေမွန် အတွက် ပရိသတ်တွေ သာမက အနုပညာ အသိုင်းအဝိုင်းက ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အားလုံးကပါ နှမျောတသ ဖြစ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသေ သွားသော်လည်း နာမည် မသေသွား တဲ့ ရေမွန် ရဲ့ သီချင်းတွေ ကို အခုထိ
အားပေး နားဆင် နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေမွန် ကို ချစ်ကြတဲ့ သူများအားလုံးက သူ့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကမ္ဘာမြေကို အကျိုးပြုစေတဲ့ သစ်ပင်လေးတွေကိုယ်စီ စိုက်ပျိုး ကြဖို့ Raymond Tree ဆိုတဲ့ campaign တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေမွန်ကွယ်လွန်တာ ရက်ပိုင်းပဲ ရှိသေး ပေမယ့် သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေဟာ လူမှု့ကွန်ယက် ပေါ်တွင် အခုထိ မငြိမ်သက် သေးပဲ ပြောနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကလည်း အဆိုတော် မေ ရဲ့ Facebook Page တွင် သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံစားနေရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို
ဖွင့်ဟပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ လူမှုကွန်ယက် တွင် လတ်တလော မြင်နေရတဲ့သတင်းတွေကြောင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရေမွန်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြောင်း ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။” တွတ်ပီရဲ့ “သဘာဝနဲ့ငါ” သီချင်းကိုနားထောင်ချင်တယ်.. သူ Live မှာပြောသွားတာ ဒီ society ကြီးကို
စိတ်ကုန်ပြီးသဘာဝနဲ့နီးတဲ့နေရာကို တစ်ယောက်ထဲ ဒိုးသွားတဲ့အကြောင်းတဲ့..
အခု ဒီ societyကြီး က သူသွားတာ တောင်ရက်ပိုင်းပဲ ရှိသေးတယ် ဖြစ်နေကြတဲ့ ပွဲတွေကို သူသိရင်လည်း စိတ်ကောင်းမယ် မထင်ဘူး..” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေကလည်း အခုလိုပွဲတွေ ဖြစ်နေတာထက်စာရင် ရေမွန်ရဲ့ ဘယ်သီချင်းတွေကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ ။
ရေမွန် နဲ့ ဆုံဖြစ်လို့ သီချင်းဆို ခိုင်းတဲ့ အခါတိုင်းလည်း ” ချန်ခဲ့ က လွဲလို့ တခြား သီချင်းတောင်းကြဟာ တဲ့.. သူခဏ ခဏ ဆိုရလို့ မဆိုချင် ဘူးတဲ့ သူပြောတာလေး
မှတ်မိလိုက်လို့ပါ” ဆိုပြီး အမှတ်တရ အချို့ကိုလည်း သတိတရ နဲ့ ရေးသားပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေမွန်တစ်ယောက် ကောင်းကင်ဘုံမှာအေးချမ်းစွာ အနားယူနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ဒီသတင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။ဖတ်ရှု့ပေးသူ တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်း ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိ
Source -May Facebook Page
ခုတေလာ လိုင္းေပၚတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ သတင္းေတြအေပၚ ဆုံးရႈံးသြားတဲ့သူငယ္ခ်င္းအေပၚ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့ ေမ….
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ က်န္းမာေရး ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ တဲ့ အဆိုေတာ္ ကိုေရမြန္ အတြက္ ပရိသတ္ေတြ သာမက အႏုပညာ အသိုင္းအဝိုင္းက ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံးကပါ ႏွေမ်ာတသ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေသ သြားေသာ္လည္း နာမည္ မေသသြား တဲ့ ေရမြန္ ရဲ႕ သီခ်င္းေတြ ကို အခုထိ
အားေပး နားဆင္ ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရမြန္ ကို ခ်စ္ၾကတဲ့ သူမ်ားအားလုံးက သူ႔အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ကမာၻေျမကို အက်ိဳးျပဳေစတဲ့ သစ္ပင္ေလးေတြကိုယ္စီ စိုက္ပ်ိဳး ၾကဖို႔ Raymond Tree ဆိုတဲ့ campaign တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရမြန္ကြယ္လြန္တာ ရက္ပိုင္းပဲ ရွိေသး ေပမယ့္ သူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာေတြဟာ လူမႈ႕ကြန္ယက္ ေပၚတြင္ အခုထိ မၿငိမ္သက္ ေသးပဲ ေျပာေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔ညကလည္း အဆိုေတာ္ ေမ ရဲ႕ Facebook Page တြင္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခံစားေနရတဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြကို
ဖြင့္ဟေျပာျပလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လူမႈကြန္ယက္ တြင္ လတ္တေလာ ျမင္ေနရတဲ့သတင္းေတြေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ေရမြန္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။” တြတ္ပီရဲ႕ “သဘာဝနဲ႔ငါ” သီခ်င္းကိုနားေထာင္ခ်င္တယ္.. သူ Live မွာေျပာသြားတာ ဒီ society ႀကီးကို
စိတ္ကုန္ၿပီးသဘာဝနဲ႔နီးတဲ့ေနရာကို တစ္ေယာက္ထဲ ဒိုးသြားတဲ့အေၾကာင္းတဲ့..အခု ဒီ societyႀကီး က သူသြားတာ ေတာင္ရက္ပိုင္းပဲ ရွိေသးတယ္ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ပြဲေတြကို သူသိရင္လည္း စိတ္ေကာင္းမယ္ မထင္ဘူး..” ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမကလည္း အခုလိုပြဲေတြ ျဖစ္ေနတာထက္စာရင္ ေရမြန္ရဲ႕ ဘယ္သီခ်င္းေတြကို အႀကိဳက္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ။
ေရမြန္ နဲ႔ ဆုံျဖစ္လို႔ သီခ်င္းဆို ခိုင္းတဲ့ အခါတိုင္းလည္း ” ခ်န္ခဲ့ က လြဲလို႔ တျခား သီခ်င္းေတာင္းၾကဟာ တဲ့.. သူခဏ ခဏ ဆိုရလို႔ မဆိုခ်င္ ဘူးတဲ့ သူေျပာတာေလး
မွတ္မိလိုက္လို႔ပါ” ဆိုၿပီး အမွတ္တရ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း သတိတရ နဲ႔ ေရးသားေျပာျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရမြန္တစ္ေယာက္ ေကာင္းကင္ဘုံမွာေအးခ်မ္းစြာ အနားယူႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးရင္း ဒီသတင္းေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္။ဖတ္ရႈ႕ေပးသူ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္း ကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိ
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အဆိုတော်ရေမွန်အားရည်စူးရဲ့ ပရိတ်သတ်များမှ ကင်းမရွာမီးဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေ (၅၃၃) သိန်းလှူဒါန်းခဲ့
(၂) ခါ (၃) ခါ လုပ်ကြည့်ရုံနဲ့ ဆံပင်ကျွတ်တာ နှစ်ခွဖြစ်တာ ထိပ်ပြောင်တာ ဆံပင်ဖြူ နေရာက ပြန်ကောင်းလာတဲ့ ဆေးနည်းပါ